Nezvedu | Jiande Welfine Kunze & Export Co, Ltd.
Jiande Welfine Kunze & Export Co, Ltd.
Iyo yekutanga JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY Fekitori. Inowanikwa mune rakasimukira mune hupfumi guta reHangZhou Jiande, rakagadzwa muna 2001, Welfinehas inozvivakira musangano we5000 mativi emamirimita, wepagore ekugona kugona kwematani mazana mashanu.
Isu takasarudzika muupfu simbi ine makore gumi neshanu chiitiko nerumbidzo rweveruzhinji, quanlity uye kuvimbika mundima iyi. Kune zviuru zvezvigadzirwa zvakagadzirwa, kutumira kunze kuJapan, Denmarks, Netherlands neUSA, nezvimwe.
Isu tine redu rekutsvagisa & timu yekusimudzira. Zvese zvigadzirwa zvitsva zvine yakasimba tekinoroji rutsigiro kumashure kwavo.
Nedu pachedu otomatiki hydraulic michina, otomatiki echimakanika anodzvanya, evha mavhenji, akakwira-chaiwo EDM michina, Lathe，kunyausa kwevira remhangura，CNC Maching zvishandiso, zvinokuya etc.
Zvigadzirwa zvepamberi: anozvizora iwo mabheyari, sintered giya，zvimwe zvemuchina chimiro zvikamu & nesimbi base mhangura chiwanikwa aling bushing, iyo simbi ichikanda mhangura collar, simbi mhangura inoumbwa nehusingi, gadhi seti yebhillet.
Tine yakakwana yekuongorora michina: wepasirese yekuyedza muchina, tensile yekuyedza muchina, kuomarara michina, density midziyo, metalloscope, optics mufananidzo chiridzwa, spectrograph，etc.
ISO9001: 2000 mhando manejimendi manejimendi inosimbiswa neIQNet uye CQC.
Ese ekuzvizora iwo mabheyari anopiwa neWel faini akareba akaenzana kune epasi rose zviyero zvemakemikari uye epanyama zvivakwa, zvakadai ASTM, JIS, DIN, MPIF, SAE, GB…